Inkabadan 200 Askari oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgalkii Afqaanistaan.(Faafaahin) – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Inkabadan 200 Askari oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgalkii Afqaanistaan.(Faafaahin)
Last updated Jan 22, 2019 200 0
Naftii-huraha daah furay howlgalka.
Khasaaraha ka dhashey howlgal ballaaran oo ciidamada Imaarada islaamiga ay ku qaadeen xarun ay ku sugnaayeen ciidamada gaarka ah ee xukuumadda Kaabul ayaa aad u kordhay, waxaana marba marka ka dambeysa soo baxaya faafaahinno horleh.
Maalintii shalay ayay ahayd markii Inqimaasiyiin katirsan Imaarada ay weerar ku qaadeen saldhig weyn oo magaalada Meydaan-shaar ee xarunta gobolka Meydaan-wardak ku leeyihiin ciidamada sida gaarka u tababaran ee daacadda u ah kuwa Maraykanka.
Weerarka waxaa lagu daah furay camaliyad istish-haadi ah oo uu fuliyay halyeey lagu magacaabo Mullaa Cabdil-haadi, waxaana markaas kadib u daatay saldhig labo inqimaasi oo lagu kala magacaabo Xaafid Cabdullaahi iyo Xaafid Asadullaah.
Howlgal qaatay saddex saacadood oo kaamil ah ayaa ka dhacay saldhiga, waxayna mujaahidiintu toogteen inta badan ciidamadii iyo saraakiishii ka badbaaday camaliyadda istish-haadiga ah.
War kasoo baxay Imaarada islaamiga ee Afqaanistaan waxaa lagu sheegay in howlgalkaas lagu dilay ugu yaraan 90 askari, halka lagu dhaawacay boqol kale, waxaana mar weliba sii kordhaya khasaaraha gaaray ciidamada xukuumadda Kaabul, maadaama ay jiraan dhawacyo garaab ah.
Sarkaal katirsan wasaaradda gaashandhiga xukuumadda Kaabul oo diiday in magaciisa loo adeegsado warbaahinta, lana hadlay wakaaladda Reuters ayaa hoosta ka xariiqay in tirada ciidamadooda looga dilay howlgalka Meydaan-wardak ay gaarayaan dhimashada 120 askari oo ay ku jiraan saraakiil sar sare.
Saldhiga ay mujaahidiintu weerareen waxaa ku sugnaa guud ahaan askar gaareysa 250 oo kamid ah ciidamada la shaqeeya Maraykanka, waxaana gebi ahaanba dhaawac iyo dhimasho noqday ciidamadii halkaas joogay.
Ciidamada la weeraray ayaa ka dhignaa difaaca koonfureed ee magaalada Kaabul, waxayna sidoo kale ka qeyb galayaan howlgallada habeen dheelmadka ah ee ay gobollada dalka Afqaanistaan ka fuliyaan ciidamada Maraykanka.
Imaarada islaamiga ee Afqaanistaan waxay shaaca ka qaaday in ciidamadaas lagu baabi’iyay howlgalkaas ay sabab u ahaayeen istish-haadka tobanaan ruux oo shacab masaakiin ah, kadib markii xilliyo habeen ah ugu soo dheceen guryahooda.
Dabiixullaahil Mujaahid, Afhayeenka Imaarada islaamiga ee Afqaanistaan ayaa sheegay in waqti dheer ay mujaahidiintu qorsheynayeen howlgalkan, Allaah-na uu ugu dambeyn u fududeeyay, wuxuuna ku hanjabay inaanu noqon doonin howlgalkii ugu dambeeyay ee beegsada ciidamada uu ku adeegto Maraykanka.
Imaarada islaamiga ee Afqaanistaan ayaa gobollada dalkaas ka wada howlgalka jihaadiga ee loogu magacdaray Al-khandaq, kaas oo gugii lasoo dhaafay lagu dhawaaqay, waxaana rafadkii ugu dambeeyay ku jira ciidamada Maraykanka oo ku toogtamaya in la siiyo wado aamin ah oo ay uga baxaan wadanka muslimka ah ee Afqaanistaan.
Nafhurka iyo halganka Jihaadka Afqaanistaan waxaa laga baran karaa in cadow kasta oo kusoo duula dal muslim ah uu ugu dambeyn isagoo dulleysan ka baxayo dalkaas, keliyana waxa laga doonayo Umadu ay tahay Jihaad iyo sabar.